Philips 273B9, kormeer kor u qaadaya shaqada telefoonka [Falanqaynta] | Wararka Gadget
Philips 273B9, kormeer kor u qaadaya shaqada telefoonka [Falanqaynta]
Philips wuxuu sii wadaa inuu kala shaqeeyo MMD horumarinta iyo kor u qaadida kormeerayaasha PC-ga noocyadiisa kala duwan. Waqtiyadaan, kormeerayaasha cabirkoodu u dhexeeyo 24 iyo 27 inji waxay helayaan sumcad gaar ah kor u kaca shaqada, waana tan markaan ka imaanayno Actualidad Gadget si aan kaaga caawino inaad doorato habka ugu fiican.
Waxaan la imaaneynaa miiska dib-u-eegista Philips 273B9-ka cusub, oo ah kormeere Full HD ah oo leh isku xirnaanta USBC oo kaa caawin doonta inaad awood u yeelatid shaqada. Waxaan si qoto dheer u eegeynaa astaamaheeda farsamo iyo gaar ahaan wixii khibradayadu soo martay intii lagu jiray tijaabooyinka la qaaday.
2 Ku habboonaanta shaqada telefoonka
3 Sifooyinka farsamada
4 Baaxadda isku xirnaanta iyo shaqeynta
Xaaladdan oo kale, Philips wuxuu doortay naqshad miyir leh, In kasta oo ay tahay inaan dhahno shirkada badanaa waxaa lagu gartaa soo saarida aalado leh waxyaabo yar yar marka loo eego naqshadeynta ama qalabka, tani had iyo jeer waxay na siineysaa kudhowaad kalsooni, iska caabin iyo miyir qabka jawiyada shaqada qaarkood.
Xaaladdan oo kale, Philips wuxuu doortay caag madow oo madoow ah iyo loox aad u yaraaday oo loogu talagalay xagga sare iyo dhinacyada. Maahan sidaas qeybta hoose halkaasoo qaar ka mid ah dareemayaal aan gadaal ka hadli doonno ay ku yaalliin.
Soo iibso Philips 273B9 kormeer> LINK
Saldhig aad u ballaaran oo guurguura oo leh weel yar, oo ku habboon maniacs qalinka. Boodhadhku wuxuu ku yaal dhinaca midig ee hoose wuxuuna leeyahay nidaam fudud oo HUD ah taas ayaa lagu soo bandhigi doonaa shaashadda markaan mid kasta oo iyaga ka mid ah riixno. Xidhiidhyada xagga dambe ku yaal dhammaantood waxay ku yaalliin isla aagga.
Cabirrada: 614 X 372 X 61 mm
Miisaanka: 4,59 Kg oo aan taagnayn / 7,03 Kg oo taagan
Istaagga ayaa si fudud loogu dhejiyaa iyada oo la adeegsanayo badhanka isdabajooga. Marka la dhigo waxaan awood u yeelan doonnaa inaan dhigno kormeeraha meesha aan dooneyno. Waxaan leenahay kormeere si fiican ugu muuqda meel kasta oo shaqo ah iyo xitaa xafiiskayaga "guriga".
Ku habboonaanta shaqada telefoonka
Tiirka aasaasiga ah ee raaxada kormeerahani wuxuu ka bilaabmayaa saldhigga in taageeradiisu ay noo oggolaaneyso inaan isku hagaajinno dhererka illaa 150 millimitir toosan. Caddayntu waxay noo oggolaan doontaa inaan hagaajino kormeeraha illaa 90 digrii iyo illaa 30 digrii xagal hoos u janjeedha oo qumman
Dhinaceeda, saldhiggu waa mobayl, si fudud ayuu isu rogaa, tiir kale oo aasaasi ah markaan rabno inaan leenahay koontada geeska miiska maxaa yeelay waxaan isla mar kawada shaqeynaa waxyaabaha ku jira qaabka warqadda iyo sidoo kale dhijitaalka
Dhinaceeda, aagga barxadda barxadda waxaan ka heli doonnaa afar wilal oo noogu adeegi doona rakibidda taageero waafaqsan is-waafajinta - VESA, si kale haddii loo dhigo, tallaabooyin dhaqameed ay fududahay in laga helo goob kasta oo iib ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan helnay wax lala yaabo. Ku hel qiimaha ugu fiican ee Amazon (isku xirka).
Boolalkan waa masaafo-gaaban, sidaa darteed waxaan kaliya ku dari karnaa adabtarada VESA oo leh cabbiraad sax ah, Si kale haddii loo dhigo, ma awoodi doonno inaan ka faa'iideysanno adabtarada dhowr tallaabo maxaa yeelay boolalkan ayaan dheereyn. Waxaan ku xallinay dhibaatadan helitaanka boolal isku mid ah laakiin dheer.
Hadda waxaan u aadnay dhanka farsamada, waxaanna hor joognaa kormeere MMD IPS LCD oo leh 27 inji (68,6 sentimitir). Waxay leedahay daahan ka-hortagga milicsiga matte oo ka dhigaya mid ku habboon xaaladaha oo dhan, waxay kaloo ka hortagtaa ceeryaanta 25%, shaki la'aan waa kormeeraha dagaalka oo si fudud loo nadiifin doono.
Ku saabsan qaraarka, Philips wuxuu doortay 1080p (Full HD) oo leh heer cabbitaan dhexdhexaad ah oo ugu sarreeya oo taagan 75 Hz, tan ayaa naga dhigeysa inaan helno 4ms dib u dhac .
Lahaansho Bilaash ah
HDMI waa diyaar
Sida dhalaalka, waxay ku jirtaa tirakoobka dhexe ee 250 nits. Waxaan haynaa 98% astaanta sRGB iyo 76% oo ka socda NTSC.
Waxaan hadda muujineynaa PowerSensor, nidaam dareemayaal ah oo ka hooseeya astaanta Philips oo noo oggolaan doonta inaan ogaanno marka aan horjoogno kormeeraha isla markaana aan go'aansanno goorta aan galno "hurdada" hab aan u baahnayn inaan u sheegno, taasoo si weyn u yareyn doonta isticmaalka tamarta, gaar ahaan bay'adaha xafiiska. Waxaan ogaanay inay ka shaqeyso wax ka badan saxda, lagu hagaajin karo dherer ahaan iyo la beddeli karo.
Baaxadda isku xirnaanta iyo shaqeynta
Marka la eego muuqaalka, waxaan horeyba u cadeynay in jawiga shaqadu uu ka badan yahay daboolida, sikastaba ha ahaatee waxaan inbadan ka hadalnaa. IYOste Philips 273B9 waxaa loogu talagalay inay ka gudubto dhammaan noocyada dhibaatooyinka, waxayna ku muujineysaa isku xirkeeda.
Maqalka / Maqalka maqalka
2x USB 3.1 oo leh Delivery Power
2x USB caadi ah
Sanduuqa waxaa ku jira dekedda HDMI, DisplayPort iyo USB-C oo leh teknolojiyadda DisplayPort 3.0. Maanta buugaag badan ayaa si toos ah ula yimaada dekedaha UBSC iyo wax kale toona, sida ku jirta MacBook Pro 16 ″ oo aan u isticmaalnay tijaabinta, tanina waxay ahayd farxad weyn.
Dekedda USB-C ee kormeeraha ayaa siin doonta illaa 60W oo lacag ah laptop-ka aan isku xireyno, isla waqtigaasna ay ku heli doonto sawir ku jira qaraar buuxa oo HD ah. Si kastaba ha noqotee, waxku halkan ma yaal, waxaan xaqiijinnay in Philips 273B9 waxay u shaqaysaa sidii dekedda HUB, sidaas darteed waxaan ku xiri karnaa kumbuyuutarkeena iyo si toos ah ugu dheji USB kormeeraha si uu ugu shaqeeyo buugga yar, oo waliba isku xidha nooc kasta oo kayd ah.
Way cadahay in aan wajaheyno kormeer "dagaal" ah, oo loogu talagalay in lagu xaliyo xaalado kala duwan iyada oo aan jawiga lagu istaagin, ayada oo aan aad u iftiimin wax kasta oo muuqaal ah, laakiin aan siineyno iskuxirnaanta shaqooyinka ay adagtahay in lala jaan qaado kormeerayaasha kale. Natiijadu waa qiime, iyada oo aan la mamnuucin, ka fog heerarka hooseeya. Si kastaba ha noqotee, Haddii aan xisaabta ku dareyno inay u shaqeyso sidii USB-C HUB, oo bixisa 60W lacag ah laptop-ka oo leh SmartErgoBase, waxay umuuqataa inay ka badan tahay maalgashi wanaagsan.
Waxaad ka heli kartaa bogga rasmiga ah ee Philipsama si toos ah on Amazon ka 285 euro.
Xiriiro badan oo noocyo kala duwan leh xaga dambe
SmartErgoBase si ay noogu oggolaato meel ku habboon oo la isticmaali karo
Guddi si fiican loo rakibay, oo ah nooca Philips
Waxaa laga yaabaa in naqshad aad u miyir badan
Waxay u baahan tahay qaabeyn si looga faa'iideysto USB-C HUB
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Philips 273B9, kormeer kor u qaadaya shaqada telefoonka [Falanqaynta]
Chromecast leh TV-ga Google, falanqaynta, qiimaha iyo astaamaha
WeTransfer: waa maxay sideese u shaqaysaa?